20 Fikradaha Suuqgeynta Xorta ah ee Abriil si aad u cusboonaysiiso jadwalkaaga macluumaadka | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/20 Fikradaha Suuqgeynta Xorta ah ee Abriil si aad u cusboonaysiiso jadwalkaaga macluumaadka
20 Fikradaha Suuqgeynta Xorta ah ee Abriil si aad u cusboonaysiiso jadwalkaaga macluumaadka
20+ Fikrado suuq-geyneed oo bilaash ah Abriil si loo cusboonaysiiyo jadwalkaaga macluumaadka
Gu'ga waa wakhti aad u wanaagsan in lagu xumeeyo quudkaaga Instagram sawirro dhalaalaya oo aad ka faa'iidaysato dhammaan ciidaha iyo fursadaha xayaysiis ee ay bixiso. Waxa jirta Maalinta Jiiska ee Qaranka ee la dubay, u kaxee ilmahaaga maalinta shaqada, Bisha wacyigelinta Ootiisamka, Bisha Wacyigelinta Weerarka Galmada, iyo in ka badan. Ixtiraamyadan iyo mawduucyadani waxay ku siinayaan fursado aad kula xiriirto macaamiishaada, aad u muujiso codkaaga iyo qiyamka, iyo si halabuur leh uga qaybgeliso dhagaystayaashaada-gaar ahaan warbaahinta bulshada.
Maqaalkan, waxaanu ku siin doonaa liiska mawduucyada Abriil, ciidaha, iyo sababaha wacyigelinta iyo sidoo kale tusaalayaal dhab ah oo ka yimid ganacsiyada warshado kala duwan si ay kaaga caawiyaan inay ku siiyaan xoogaa dhiirigelin ah. Markaa aan galno.
Iyo fikradaha sanadka oo dhan, hubi tan cajiibka ah kalandarka suuq geynta by asxaabta LOCALiQ.
Fasaxa Abriil iyo sababaha wacyigelinta
Waa kuwan liiska ciidaha badan iyo maalmaha qaranka ee la xuso Abriil kuwaas oo samayn kara suuqgeyn hal abuur leh oo loogu talagalay ganacsigaaga maxalliga ah:
Axadda Ciidda Masiixiga
Maalinta Xisbiyada Adduunka
U Soco Maalinta Shaqada
Maalinta Jiiska la dubay
Sare Shan Maalin
Baro Maalinta Macmiilkaada
Maalinta Xirfadlayaasha Maamulka
U kaxee Ilmahaaga Maalinta Shaqada
Iimaylka Maalinta Cafiska Deynta
Mawduucyada iyo sababaha wacyigelinta ee socda inta lagu jiro bisha Abriil waxaa ka mid ah:
Hal-abuurka Abriil fikradaha suuq-geynta iyo tusaalooyinka
Inta u dhaxaysa degelkaaga, baloogga, akoonnada warbaahinta bulshada, iyo Profile Business Google, waxa jira kanaalo badan oo aad ku wadaagi karto macluumaadkaaga Abriil iyo xayaysiisyadaada. Hoos waxaad ka heli doontaa fara badan oo ah fikrado hal-abuur leh bisha Abriil ee ganacsiyada dhabta ah sida kuwaaga oo kale.
1. Bisha Wacyigelinta Ootiisamka
Ootiisamku wuxuu saameeyaa 1 ka mid ah 59 carruur ah oo ku nool Maraykanka. Haddii adiga ama qof aad jeceshahay uu saameeyo cudurka autism, tani waa fursad weyn oo aad kor ugu qaaddo wacyiga adiga oo ka qayb qaadanaya waxqabadyada aad dib ugu celinayso bulshada ama lacag ururinta si aad ugu deeqdo urur u go'ay autism. Halkan waxaa ah xiriiriye si aad uga qaybgasho dhacdo agtaada ah. Ama waxaad ku tusi kartaa taageeradaada alaabada khuseysa, sida tusaalaha hoose:
2. Bisha Qaranka ee Ka Hortagga Xadgudubka Carruurta
U muuji taageeradaada Bisha Qaranka ee Ka-hortagga Xad-gudubka Ilmaha oo leh pinwheel buluug ah, kaas oo ah astaanta qaranka ee sababta.
Ama ku beero beerta pinwheel ee goobtaada ganacsiga oo la wadaag kuwa raacsan adiga oo rajeynaya in kor loo qaado wacyiga.
3. Bisha Aqoonta Maaliyadda
Si loo sharfo Bisha Aqoonta Maaliyadeed, daabac qoraal ku saabsan mawduuc la xidhiidha maaliyadda. Ama, ku dhiiri geli kuwa raacsan inay bilaabaan wada hadal ku saabsan sida ay u dooran lahaayeen inay ku bixiyaan lacag caddaan ah oo dheeri ah haddii ay ku dhacdo laabtooda. Faallooyinkani waxay noqon karaan kuwo hal abuur leh!
4. Xiliga Prom
Noocyo badan oo ganacsiyo ah ayaa soo saari kara boostada si ay u galaan xamaasadda xilliga prom. Makhaayadani waxay lacag kaash ah ka helaysaa caannimada "soo jeedinta".
Ka fakar inaad soo dhejiso wax faa'iido u leh waalidiinta kuwaas oo laga yaabo inay ka walaacaan socodka habeenka prom… bixinta macluumaadka waxtarka leh waxaa mahad leh taageerayaashaada - qofna ma rabo in laga iibiyo 24/7.
Haddii ay dhacdo in aad haysato wax bixin ku habboon xilliga prom, ha ka xishoon inaad sidoo kale xayeysiiso naftaada.
5. Maalinta Nacasnimada Abriil
Ku raaxayso qaar ka mid ah suuq-geyntaada Abriil 1. Maalinta Foolska ee Abriil waa cudur daarka ugu fiican ee lagu ciyaaro kaftan wax ku ool ah macaamiishaada-kaliya iska hubi inaad wax fudud oo madadaalo leh ka dhigto. Xarumaha fayadhowrka waxay bixin karaan cheeseburgers-ka-calorie-la'aanta ah, dugsiyada barbaarinta waxay bixin karaan fasal lagu baro ABC-yada eeyaha, iyo istuudiyaha duugista waxay bixin karaan duugis-free-taabasho ah. Dhammaan kuwanu waa kaftan cad oo la xidhiidha ganacsigaaga. Siyaabo kale oo aad ugu suuq gayn karto ganacsigaaga Maalinta Foolska ee Abriil waa in aad u tartanto tartanka ugu xiisaha badan, ama in aad la wadaagto sawirrada shaqaalahaaga oo ka qayb qaadanaya madadaalada.
6. Maalinta Walaalaha Qaranka
Haddii aad ganacsi qoys leedahay ha ilaawin maalinta walaalaha ee qaranka. U dabaaldeg wadajirkiina idinkoo kor u qaadaya ganacsigaaga. Ama si fudud u bixi fikrado ku saabsan siyaabaha loo ixtiraamo maalinta.
Haddii ay khuseyso, socodsii dalacsiin gaar ah walaalaha leh heshiisyo laba-hal-hal ah. Ama waxaad u dabbaal degi kartaa adiga oo si fudud u sawiraya dhammaan walaalaha goobtaada yimaada oo aad ku dhejiso baraha bulshada.
7. Maratoonka Boston
WordStream saldhigeedu yahay Boston si aanu taageereyaal wayn u nahay marathon-ka, laakiin uma baahnid inaad noqoto deegaanka si aad u taageerto. U muuji taageeradaada ciyaartoyda maxaliga ah ee ordaya ama la safraya xubnaha qoyska ee ku ordaya maaratoonka. Xarumaha jimicsiga waa in ay muujiyaan taageeradooda dalka oo dhan ee marathon-ka. Makhaayadaha maxaliga ahi waxay bixin karaan cuntooyin "carb loading" ka hor marathon-ka iyo istuudiyaha duugista ayaa qiimo dhimis u fidin kara orodyahanada.
8. Maalinta Xirfadlayaasha Maamulka
Hubi inaad u mahadceliso shaqaalaha taageerada maalinta Xirfadlayaasha Maamulka. Tani waa hab wanaagsan oo aad ganacsigaaga iyo summadaada uga dhigi karto mid gaar ah warbaahinta bulshada iyo bloggaaga. Muuji waxa ay shaqaalaha taageeradaadu u qabtaan ganacsigaaga oo ku warayso bloggaaga ama muuqaal. Macaamiisha la falgala shaqaalaha taageerada waxay jeclaan doonaan inay ku arkaan tooshka!
9.Maalinta Jiiska la dubay
Qof kastaa wuxuu jecel yahay ismarisyada jiiska la dubay si aad gabi ahaanba u heshid hab aad ku darto boostada Maalinta Jiiska ee Qaranka ee la dubay-haddii aad leedahay makhaayad iyo haddii kale! Fiiri sida ganacsiyadan aan cuntada ahayn ay uga dhigeen inay u shaqeeyaan:
10. National High Shan Day
Maalinta Shanta Sare ee Qaranka, weydii macaamiishaada inay muujiyaan #five oo ku dheji. Waxay u badan tahay dib u dhajinta quudintooda oo aad hesho muuqaal kale.
Waxa kale oo aad kor u qaadi kartaa Facebook-gaaga soo socda adiga oo ku martiqaadaya macaamiisha si ay u calaamadiyaan dadka ay jecel yihiin inay siiyaan shan heer sare ah.
Ama sii shantaada casriga ah ee ugu sarreeya si aad ugu mahadceliso ama qaylo gaar ah u dir macaamiisha, iibiyeyaasha, ama xitaa sabab aad taageerto.
Haddii aad u socoto, ka fikir ordaya promo taas oo ku beegan lambarka shan… ma aha in dhammaan ay noqdaan ilaa shan heer sare ah!
11. U kaxee ilmahaaga maalinta shaqada
Haddii aad carruur leedahay, u keen shaqada maalintan oo u sheeg macaamiishaada wax ku saabsan. Tani waa hab fiican oo aad ilmahaaga ku bari karto bilaabista iyo socodsiinta ganacsi kuna dhiirigeliso inay raacaan riyooyinkooda.
Sawirkooda ka qaad oo ku dheji baraha bulshada, kuna dhiirigeliya macaamiisha inay soo galaan oo ay salaamaan. Ka dhig ilmahaaga "madaxda" maalinta. Ku dhajinta sawirada ama sheekooyinka shabakadaha bulshada waa hab fiican oo lagu mashquuliyo macaamiisha iyo in lagu shakhsiyeeyo astaantaada. Waxaa dheer, waxaad tusi kartaa carruurtaada qurxoon!
12. Maalinta Dhulka
Maalinta Dhulka iyo Maalinta Dhirta waxay dhammaan ku saabsan yihiin dabeecadda iyo geedaha. U isticmaal fasaxyadan sidii fursad suuqgeyn ganacsigaaga. Dukaamada ubaxa waxay martigelin karaan fasal ama waxay qoraan blog ku saabsan dib u isticmaalida ubaxyada la qalajiyey ee qurxinta, naqshadeeyayaasha gudaha waxay ku siin karaan talooyin ku saabsan qurxinta dabeecadda, iyo xarumaha fayadhowrka waxay qaadan karaan xiisado ka baxsan socodka ama jimicsiga oo qadarinaya dabeecadda.
13. Easter iyo Kormaridda
Makhaayadaha, dabcan, waxay martigelin karaan brunch Easter-ka ama waxay xayaysiiyeen Kosher-kooda alaabta Iidda Kormaridda. Sawirqaadayaashu waxay samayn karaan sawirada Easter-ka gaarka ah. Xannaano-maalmeedyadu waxay u samayn karaan maalin u gaar ah carruurtu si ay sawirro ula galaan bunny Easter-ka. Xarumaha jimicsiga waxay yeelan karaan maalin madadaalo qoys oo leh ugaarsiga ukunta Easter-ka. Rootiyadu waxay dhejin karaan alaabtooda la dubay si ay u kordhiyaan dalabkooda. Ama, maamul "peeps" gaar ah sida uu meheraddan sameeyay:
Saaxiibadayada LOCALiQ waxay hayaan fikrado suuq-geyneed Easter oo badan oo aad adigu iska hubiso.
14. Maalinta Canshuurta
Maalinta cashuurtu waa maalin ay dadku jecel yihiin (maxaa yeelay waxa loo soo celinayaa) ama neceb yihiin (maxaa yeelay lacag lagu leeyahay). Tani waa waqtigii ugu fiicnaa ee xisaabiyeyaasha si ay u suuq geeyaan ganacsigooda - haddii aysan horayba u lahayn. Laakiin noocyada kale ee ganacsiyada ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara Maalinta Canshuurta sidoo kale.
Makhaayadaha iyo baararka waxay martigelin karaan xafladaha Maalinta Cashuurta kadib. Dukaamada tafaariiqda waxay yeelan karaan dallacaad maalinta cashuurta ka dib si ay u caawiyaan dadka raadinaya inay kharash gareeyaan lacag celintooda. Canshuurta xereynta waa walaac, sidaas darteed xarumaha fayadhowrka ama istuudiyaha yoga waxay tan u isticmaali karaan fursad ay ku yeeshaan fasalka kabaha kabaha ama fasalka yoga gaarka ah. Wax yar oo madadaalo ah, ku dar liiska heesaha lacagta.
Ama waxaad ku samayn kartaa wax madadaalo leh nambarada, sida makhaayaddan oo kale:
15. Nadiifinta guga
Nadiifinta gu'ga waa wakhtiga ugu sarreeya adeegyada nadiifinta, qabanqaabiyeyaasha, iyo naqshadeeyayaasha gudaha. U isticmaal tan fursad si aad u siiso macaamiishaada iyo macaamiisheeda suurtagalka ah talooyin ku saabsan sida ay u kobcin karaan guryahooda xilli cusub.
Adeegyada Nadiifinta waa inay bixiyaan xayeysiis ama tixraac macaamiisha cusub ama kuwa hadda jira si ay u bilaabaan ganacsiga cimilada kulul. Qandaraaslayaasha ama adeegyada dhismuhu waa inay soo qoraan ama soo bandhigaan muuqaalo ku saabsan arrimaha caadiga ah ee soo baxa guga. Haddii aad ka bilaabayso blog, nadiifinta gu'ga waa mawduuc aad u fiican oo aad ku qorto boostadaada ugu horreysa.
16. Baro Maalinta Macaamiishaada
Baro Maalinta Macaamiishaadu waxay dhacdaa Khamiista saddexaad ee bisha ugu horreysa rubuci kasta, sidaa darteed Janaayo, Abriil, Luulyo, iyo Oktoobar-waana, dabcan, fursad weyn la macaamilka macaamiishaada. Su'aalaha ku dheji Facebook-ga kuwaas oo ku lug leh wadahadal. Weydii ra'yigooda si ay kaaga caawiyaan horumarinta adeegyadaada, waxa ay ka jecel yihiin ganacsigaaga, iwm.
17. Maalinta Denim
Maalinta Denimku waxay la xidhiidhaa Wacyigelinta Weerarka Galmada. Ka naso ismuujinta oo bar kuwa raacsan taariikhda fasaxa.
Ama tus taageeradaada dhibanayaasha faraxumaynta galmada adoo waydiinaya shaqaalaha inay xidhaan denim si ay u shaqeeyaan maalintan.
Si hal-abuur leh u suuqgeyn ganacsigaaga bishan Abriil
Laga soo bilaabo nadiifinta guga iyo hooyada Earth ilaa ismaris jiiska la dubay iyo shanta sare, waxaa jira fursado badan oo aad ku suuqgeyn karto ganacsigaaga Abriil. Oo haddii aad raadinayso fikrado suuq-geyneed bille ah oo badan, waxaan helnay waxyaabo badan:
Oo halkan waa taxanahayaga buuxa ee fikradaha suuq-geyneed ee billaha ah
15ka Janaayo Fikradaha Suuqgeynta ee lagu Bilaabo Sanadka Cusub Bangi
20 Fabul Fabul (oo La awoodi karo) Feebarwari Fikradaha Suuqgeynta
30+ Hal-abuur leh iyo Fikrado Suuq-geyneed-saaxiibtinimo leh ee Maarso
50+ Fikradaha Suuqgeynta ee Meherad kasta ama Miisaaniyad kasta
50+ Fikradaha suuq-geynta Juun ee bilaashka ah ee Ololaha Kulul ee Sizzlin
37 Fikradaha Suuqgeynta Xorta ah iyo Hal-abuurka Luulyo (Tusaaleyaal!)
17+ Fikradaha Suuqgeynta Sebtembar oo bilaash ah oo Hal-abuur leh
21+ Fikirka Suuqgeynta Xorta ah ee Waxtarka leh ee Oktoobar
19 Fudud Hase Yeeshee Fikradaha Suuqgeynta ee Noofambar (oo wata Tusaalayaal)
20-Festive Diseembar Fikradaha Suuqgeynta
Iyo fikrado suuq-geyneed qiimahiisu yahay sannad, ka eeg jaantuskan jadwalka suuq-geynta ee saaxiibbadayada LOCALiQ.
15ka ugu Wanaagsan Boga Login Custom ee WordPress
Qiimaha & Warbixinada Dib u eegista WooCommerce: Lasoco Qiimaha WooCommerce iyo Calaamadaynta Xakamaynta